Uma ungazi ukuthi iyini i-WordPress Child Theme ... | Martech Zone
Ushintsha izingqikithi ze-WordPress ngokungalungile.
Sisebenze namakhasimende amaningi futhi sakha amakhulu amasayithi we-WordPress eminyakeni edlule. Akukona ukuthi umsebenzi wethu ukudala amasayithi e-WordPress, kepha sigcina sikwenzele amaklayenti amaningi. Amaklayenti awafuni ukusebenzisa amasayithi e-WordPress kaningi. Ngokuvamile beza kithi ukusiza ukuthuthukisa amasayithi abo ngokusesha, kwezenhlalo nasekuguqulweni.
Kaningi kunalokho, sithola ukufinyelela kusayithi ukukhulisa amathempulethi noma ukwakha izifanekiso ezintsha zekhasi lokufika, bese sithola okuthile okubi. Sivame ukuthola itimu eyakhiwe kahle, esekelwa kahle eyathengwa njengesisekelo sesayithi yabe isishintshwa kakhulu yi-ejensi yangaphambilini yeklayenti.
Ukuhlela ingqikithi eyinhloko umkhuba omubi futhi udinga ukuyeka. I-WordPress ithuthukisiwe Izingqikithi Zengane ukuze izinhlangano zikwazi ukwenza ngokwezifiso ingqikithi ngaphandle kokuthinta ikhodi eyinhloko. Ngokuya ngeWordPress:
Ingqikithi yengane iyitimu ezuza ukusebenza nesitayela senye itimu, ebizwa ngengqikithi yomzali. Amatimu ezingane ayindlela enconyiwe yokuguqula itimu ekhona.
Njengoba izingqikithi ziba nokuhileleka ngokwengeziwe, ingqikithi ivame ukuthengiswa futhi ivuselelwe kaningi ukunakekela izimbungulu noma izimbobo zokuphepha. Abanye abaklami bezingqikithi baqhubeka nokwenza ngcono izici kutimu yabo ngokuhamba kwesikhathi noma basekele itimu ngezibuyekezo zenguqulo ye-WordPress. Sithenga iningi lezindikimba zethu kusuka ku- I-Themeforest. Uzothola ukuthi izingqikithi eziphezulu ku-Themeforest zithengiswa amashumi ezinkulungwane zezikhathi futhi zinama-ejensi wokuqamba agcwele aqhubeka nokuwasekela.
Lapho sisebenza neklayenti, sibacela ukuba babuyekeze izingqikithi ukuze babone izici nokusebenza abakuthandayo. Siqinisekisa ukuthi itimu iyaphendula kumadivayisi eselula futhi inokuguquguquka okuhle kwezakhiwo nama-shortcode wokwenza ngokwezifiso. Sibe sesinika ilayisense bese silanda ingqikithi. Eziningi zalezi zingqikithi ziza kuqala ukuhlanganiswa ngefayela le- Izingane Zesihloko. Ukufaka zombili izindlela ze- Izingane Zesihloko futhi Itimu Yomzali, bese wenza kusebenze i- Izingane Zesihloko ikuvumela ukuthi usebenze ngaphakathi kwengqikithi yengane.
Ukwenza ngokwezifiso Itimu Yezingane
Izindikimba Zengane ngokuvamile zifakwa kuqala ngengqikithi yomzali futhi iqanjwe ngetimu enengane kuyo. Uma ingqikithi yami ithi I-Avada, Ingqikithi Yezingane ngokuvamile ibizwa nge-Avada Child futhi iqukethwe kufayela le- ingane ye-avada ifolda. Lowo akuwona umhlangano omuhle kakhulu wokuqamba amagama, ngakho-ke siqamba kabusha isihloko kwifayela lesitayela.css, siqambe kabusha ifolda ngemuva kweklayenti, bese sifaka isithombe-skrini sesayithi lokugcina, elenziwe ngokwezifiso. Senza ngezifiso imininingwane yesitayela ukuze iklayenti likwazi ukubona ukuthi ngubani owakhe ngokuzayo.
Uma Izingane Zesihloko akufakiwe, usengayakha eyodwa. Isibonelo salokhu iTimu Yezingane esiyenzele i-ejensi yethu. Siqambe isihloko DK New Media 2018 ngemuva kwesiza sethu nonyaka owaqala ngawo ukusebenza futhi wafaka Ingqikithi Yengane kufolda eyodwa-eziyisishiyagalombili. Ishidi lesitayela le-CSS labuyekezwa ngolwazi lwethu:
/ * Igama Lengqikithi: DK New Media Incazelo ka-2018: Ingane yengane ye- DK New Media ngokususelwa ku-Avada theme Author: DK New Media
Umbhali URI: https://dknewmedia.com Isifanekiso: I-Avada Version: 1.0.0 Umbhalo Isizinda: Avada * /
Ngaphakathi Izingane Zesihloko, uzobona ukuncika kwengqikithi yomzali kukhonjwe njenge- Isifanekiso.
Ngaphandle kokuhlelwa okuthile kwe-CSS, ifayela lokuqala lesifanekiso ebesifuna ukulishintsha kwakuyi-footer. Ukuze senze lokhu, sikopishe ifayela le-footer.php kusuka kutimu yomzali bese silikopisha kufayela le- eyodwa-eziyisishiyagalombili ifolda. Sibe sesihlela ifayela le-footer.php ngokwezifiso zethu futhi isayithi lathatha lezo.
Zisebenza Kanjani Indikimba yendaba
Uma kukhona ifayili kufayela le- Izingane Zesihloko kanye ne-Parent Theme, kuzosetshenziswa ifayela le-Theme yengane. Okuhlukile yi-works.php, lapho ikhodi kuzo zombili izingqikithi izosetshenziswa. Izingqikithi Zengane ziyisixazululo esihle kunkinga enzima kakhulu. Ukuhlela amafayela wengqikithi yomongo aku-cha futhi akufanele kwamukelwe amaklayenti.
Uma ufuna i-ejensi yokwakhela isiza se-WordPress, funa ukuthi basebenzise i-Child Theme. Uma bengazi ukuthi ukhuluma ngani, thola i-ejensi entsha.
Izingqikithi Zengane Zibucayi
Uqashe i-ejensi ukuthi ikwakhele isayithi, futhi basebenzise i-Parent Theme ne-theme yengane eyenziwe ngezifiso. Ngemuva kokuthi isayithi likhishwe futhi uqedele inkontileka, i-WordPress ikhipha isibuyekezo esiphuthumayo esilungisa umgodi wokuphepha. Ubuyekeza i-WordPress futhi isayithi lakho manje liphukile noma alinalutho.
Ukube i-ejensi yakho beyihlelile Itimu Yomzali, uzolahleka. Noma uthole i-Parent Theme ebuyekeziwe, uzodinga ukuyilanda futhi uxazulule noma yiluphi ushintsho lwekhodi ukuzama ukubona ukuthi yikuphi ukulungiswa okulungisa inkinga. Kepha njengoba i-ejensi yakho yenze umsebenzi omuhle futhi yathuthukisa i- Izingane Zesihloko, ulanda imininingwane ebuyekeziwe Itimu Yomzali bese uyifaka ku-akhawunti yakho yokubamba. Qalisa kabusha ikhasi nakho konke okusebenzayo nje.
Ukudalula: Ngisebenzisa my I-Themeforest isixhumanisi sokusebenzisana kulesi sihloko.
Tags: i-avadaingane indabaingqikithi yomzaliisihloko sangaphambiliisihloko sengane se-wordpressItimu yomzali ye-wordpressizihloko ze-wordpress
Umphumela Wezobuchwepheshe: UMartech Wenza Okuphikisanayo Nenhloso Yakhe Ehlosiwe